Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Alex Sandro Nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; 'Roberto Carlos na-esote'. Anyị Alex Sandro Childhoodmụaka Akụkọ na Akwụkwọ akụkọ na-enweghị isi Ihe eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke ndị ịgba ọsọ ndụ Brazil gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ mmekọrịta ya, ndụ ezinụlọ ya, na ọtụtụ ihe na-amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ya Juventus Exploits mana ole na ole na-atụle Alex Sandro's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Alex Sandro Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Alex Sandro Lobo Silva mụrụ na 26th ụbọchị nke January 1991 na Catanduva, São Paulo, Brazil. A mụrụ ya nne ya nwanyị bụ Lobo na nna, Mr Reinaldo Ramos da Silva.
Alex Sandro toro na Gburugburu Bom pastọ na Catanduva, na azụ azụ nke São Paulo State, kilomita 400 site na isi obodo Brazil. O tolitere na-enyere nne na nna ya aka ịzụlite na nhazi okpete nke ama obodo ya. Ọbụna mgbe ọ na-eme nke a, ya na ụmụaka ibe ya gbara bọọlụ n'okporo ámá.
Mgbe nwa okorobịa Alex malitere ịmalite n'ọchịchị na agbata obi ya, ọ malitere igwu egwu na klọb nke obodo ya CELT, klọb nke Catanduva obodo na-elekọta. Ndị otu ya sonyere na asọmpi niile nke ndị ntorobịa na São Paulo State.
A na-ewere Alex Sandro mgbe niile dị ka onye kachasị mma na otu ya. Nke a kpaliri ịkwaga ịchọta klọb ka mma maka ya. Ọ gwụchara ọrụ ntorobịa ya Atletico Parananense n'etiti 2006 na 2008 wee kwụsị ọrụ ọkachamara na ụlọ ọrụ 2010.
Sandro chọrọ ụlọ kwesịrị ekwesị iji ree ya gaa Europe. O kpebiri itinye akwụkwọ maka arịrịọ mgbazinye ego maka Santos. Ndị na-egwuri egwu n'ebe ahụ dịka otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mma, ndị na-egwu egwuregwu Porto hụrụ ya wee mee ka nrọ ya ịbịa Europe mezuo.
Mgbe ọ na-egwu maka oge 4, ọ na-eme ọganihu ọzọ na ọrụ ya. Oge a, ọ bụ site na Porto ruo otu klọb kachasị mma na Europe, Juventus. Dị ka ọ dị n'oge, ederede, Antonio Conte na-echere mbinye aka ya na akụkọ banyere Alex Sandro nyefe Chelsea FC.
Ọnye na-bụ Natalia Regina? Alex Sandro hụrụ n'anya:
Zutere Natalia Regina? Ọ bụ nwunye mara mma nke Brazil onye ọkpụkpọ bọl Alex Sandro.
O di nwute, enweghi otutu ihe Natalia Regina; dị ka ya stud, a mụrụ ya ma zụlite ya na Brazil. Natalia mụrụ nwa ha mbụ na nwa Alexia na October 8, 2016.
Ndụ nke Alex Sandro:
Alex Sandro Lobo Silva nwere àgwà ndị a n'àgwà ya.
Ike Alex Sandro: Onye na-aga n'ihu, nke mbụ, nke onwe ya, nke ndị mmadụ.
Ahụhụ Alex Sandro: Na-agba ọsọ site n'ikwu okwu mmetụta uche, mmetụta dị egwu, enweghị nkwarụ, ọpụpụ
Ihe Alex Sandro nwere mmasị: Na-enwe obi ụtọ na ndị enyi, na-enyere ndị ọzọ aka, na-alụ ọgụ n'ihi ihe kpatara ya, mkparịta ụka ọgụgụ isi na ige ntị.
Ihe Alex Sandro na-achọghị: Nkwụsịtụ, nkwa ndị a gbaghaara, ịbụ ndị owu na-ama, ndị na-adịghị mma ma ọ bụ ndị na-agwụ ike na ndị na-ekwenyeghị na ya.
Na nchịkọta, Alex Sandro dị ike ma dị mma ma dị ike. Ọ bụ onye na-eche echiche miri emi na onye nwere ọgụgụ isi.
Alex Sandro Bio - Banyere ya Football:
Egwuregwu ndị na-emerụ ahụ: Obi abụọ adịghị ya, Alex Sandro bụ mmetụta dị ike n'akụkụ aka ekpe. Ọ na-akwado ndị otu ya oge kwesịrị ekwesị. Ọ na-ejikwa bọl ahụ nke ọma ma nwee ike iji ahụ siri ike na-ewe iwe.
Egwuregwu ndị siri ike. Alex bụ onye ọbịa na usoro ntụgharị uche umengwụ nke na-ewere ọtụtụ ndị Brazil zuru oke ka ha ghara ịdị na-arụ ọrụ nchebe ha. N'ezie, ọ na-agụ egwuregwu ahụ nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma n'atụghị ụjọ ịkọwa ya. Nke a bụ ihe mere Roberto Carlos ji too onye Brazil dị ka nke ya 'onye nketa'
Ọgụ maka uwe elu Brazil:
Brazil nwere ihe ihere nke akụnụba na oghere azụ azụ Sandro, na-anya isi Real Madrid Marcelo na Filipe Luis nke Atletico Madrid dịka nhọrọ nhọrọ mbụ ha na-eme.
O nwere okpu ole na ole maka mba ya n'agbanyeghị na a na-ewere ya dịka otu n'ime ụwa kacha mma n'ọkwá ya. Na-ewere Marcos Alonso na Sandro bụ ngwá agha ọzọ nye Team Chelsea.
Ndụ Alex Sandro Ezinụlọ:
Ná mmalite, Alex Sandro si n'ezinụlọ ndị dị ala n'etiti ezinụlọ. Nke a bụ tupu ịrụsi ọrụ ike ya na itinye ego ya na football kwụrụ ụgwọ maka ya na ezinụlọ ya.
Ugbu a ọ bụ nwa amaala mbụ bara ọgaranya. Taa, nna Alex Sandro (Reinaldo Ramos da Silva), nne (Lobo Sandro), ụmụnne nwoke, ụmụnne nwanyị, nwanne nna ya, ndị ikwu ya na ndị ọzọ so na ndị ezinụlọ ya nwere obi ụtọ na ha nwere onwe ha.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Alex Sandro Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.